xiaomi Archives - SmartMe
Archives tag: xiaomi trano
Dom » Entries tagged with "xiaomi home"
Vaovao, finday avo lenta, Fandraisana Xiaomi
Mankalaza ny Xiaomi: Mi Fan Festival 2021 ... ary Google sy Qualcomm no manatevin-daharana ny fankalazana!
mi festival festival, xiaomi, xiaomi trano
Xiaomi dia mandefa ny Festival Mi Fan (MFF) isan-taona. Ny festival amin'ny 2021 dia hifantoka amin'ny lohahevitra "Hizaha ny vintana". Xiaomi dia hanasa ireo mpankafy Mi mba hiady hevitra sy hizara amin'ireo namana sy fianakaviana ny zavatra niainany momba ny ...
Vaovao, Specials, Fandraisana Xiaomi
Xiaomi dia nanomana fampiroboroboana ny Andron'ny Mpifankatia ho an'ny Mi Watch Lite
jereo aho, fetin'ny mpifankatia, xiaomi, xiaomi trano
Mi Watch Lite dia azo alaina manomboka anio amin'ny vidiny hampiroboroboana amin'ny fetin'ny mpifankatia. Nanomboka tamin'ny tsena poloney ny smartwatch tamin'ny volana desambra. Mila maika ianao. Ny vidiny mahazatra an'ny Mi Watch Lite dia PLN 249. Na izany aza, raha mieritreritra momba ny mora vidy ianao ...
Vaovao, Fandraisana Xiaomi
Ny fampiharana Xiaomi Home dia manana lohahevitra maizina
6 Febroary 2021
mi, izaho an-trano, xiaomi, xiaomi trano
Nisy zavatra efa noresahina hatry ny ela tao ambadiky ny zava-nitranga. Ny fampiharana Xiaomi Home dia nanjary manan-karena tamin'ny lohahevitra maizina, izay azo antoka fa nandrasan'ny mpampiasa maro! Niandry ela be an'io izahay, farany ...
Xiaomi Mi 11 Lite dia hasiana fakan-tsarimihetsika periskope?
1 Febroary 2021
xiaomi, xiaomi trano, xiaomi mi, xiaomi mi 11 lite
Ny zava-drehetra dia manondro fa ny maodely Xiaomi Mi 11 Lite dia hampiasa fakan-tsary fakan-tsarimihetsika. Ny premiere an'ny telefaona dia nambara tamin'ny faran'ny telovolana lasa teo. Mi 11 Lite miaraka amina fakantsary periskope? Tsaho vaovao momba ny maodely Mi 11 Lite ...
Air freshener avy amin'ny tontolon'ny Mi Home
petoneer, xiaomi, xiaomi trano
Manana olana fofona ve ianao? Amin'ny toe-javatra toy izany, misy mpanadio rivotra azo ampiasaina, ary androany dia manana mpanadio rivotra avy amin'ny tontolon'ny Mi Home ho anao. Ny marimarina kokoa avy amin'i Petoneer. Petoneer dia marika kely Xiaomi izay mifandraika amin'ny ...
Mi Smart Clock sy Mi 360 ° Home Security Camera 2K Pro - Azo alaina!
8 Janoary 2021
Mi 360 ° Security Camera Camera Pro Pro 2, Mi Smart Clock, xiaomi, xiaomi trano
Nandritra ny laharana voalohany an'ny finday Redmi 9T sy Redmi Note 9T dia tsy nanadino ireo mpankafy Smart Home i Xiaomi! Nandritra ny famelabelarana dia hitanay ny Mi Smart Clock vaovao sy ny fakantsary Mi 360 ° Home Security ...
Nahazo fanavaozana lehibe ny Mi Home!
27 Desambra 2020
xiaomi, xiaomi trano
Raha mampiasa fitaovana Xiaomi ianao dia tokony ho fantatrao tsara ny fampiharana Mi Home. Ity fampiharana ity no ampiasaina hitantanana ny trano fonenanay avy amin'ny tontolo iainana Xiaomi. Vao nahazo fanavaozana lehibe ilay rindranasa! IN ...
Xiaomi dia mampiseho ny Ultra Wide Band azy manokana
12 Oktobra 2020
Ub, xiaomi, xiaomi trano
Ny Ultra Wide Band dia fomba fifandraisana rehefa tsy mampiasa hubs WiFi na ZigBee na Z-Wave ianao. Misaotra an'io fa afaka mifampiresaka haingana kokoa ny fitaovana. Ankehitriny Xiaomi dia naneho ny UWB azy manokana. Ny zava-misy fa i Xiaomi dia manangana ny ...
hevitra, Fandraisana Xiaomi
Fakan-tsary Xiaomi 360 - Fijerena fakan-tsary fototra
25 Septambra 2020
kamera, fakan-tsary xiaomi, Fakan-tsary Xiaomi 360, xiaomi, Xiaomi 360, xiaomi trano
Miditra amin'ny Mi Store ianao, jereo ny Xiaomi 360 dia manontany tena ianao hoe: mendrika ...? Misy fiantraikany amin'ny mpividy maro io olana io. Na izany aza, tsara ny mampatsiahy fa ny fakantsary Xiaomi 360 dia iray amin'ireo fakantsary malaza indrindra avy amin'ity mpanamboatra ity. Ary manantena ihany koa aho ...
Miverina i Xiaomi miaraka amina heater vaovao - ity ny Mijia Electric Heater 1S
16 Septambra 2020
heater, xiaomi, xiaomi trano
Tian'i Xiaomi ny fampisehoana heaters rehefa manakaiky ny ririnina. Marina fa mbola manana volana vitsivitsy hanaovana an'izany isika, ary eo afovoan'ny fahavaratra eo ivelan'ny varavarankely, saingy mendrika ny manomboka mieritreritra an'izany. Xiaomi dia nanolotra ny radiator voalohany tamin'ny taona lasa ...
Google Home dia hampandre anao fotsiny ny amin'ny antso rehefa any an-trano ianao
Fampiroboroboana isan-kerinandro 12.04-18.04